Mpamorona tsara kokoa ve ianao ka lafo vidy kokoa? | Famoronana an-tserasera
Jorge Neira | | General, maro
Ny tontolon'ny famolavolana, toy ny amin'ny faritra maro, dia mankafy fampiharana manokana, izany hoe afaka miasa samirery, mandray tombony be nefa tsy mila mamaly tarehimarika na orinasa amin'ny resaka fanatrehana, kaonty ary fitsipika anatiny. Ny fanatanjahan-tena manokana dia mety hahasoa satria manimba, fa raha fintinina dia momba izany iray amin'ireo fomba fanatanjahan-tena marobe faritra iray amin'ny fahalalana.
Mpamorona sary dia olona tompon'andraikitra amin'ny famolavolana modely, marika, tarehimarika, fanovana sary, sns. Izy dia olona manokana amin'ny fanodinana sary sy fanovana. Afaka ny asanao ho hita eo amin'ny vokatra misy marikaNa sakafo, vokatra ara-pahadiovana na fitafiana mihitsy aza, noho izany, zavatra hafa misy marika.
1 Ohatrinona no takalon'ny mpamorona sary?
2 Mpamorona tsara kokoa ve ianao ka lafo vidy kokoa?
Ohatrinona no takalon'ny mpamorona sary?
Noho izany, amin'ny fiantombohan'ny fampihetseham-batana manokana dia mety hisy fetrany tena mahazatra: Tsy fahampian'ny mpanjifa ary tsy mahalala ny tahan'ny mifandraika amin'izany amin'ny asantsika ary izany dia noho ireo fetra ireo, ny mpamorona, toy ny olon-kafa, dia manapa-kevitra ny hiatrika azy ireo amin'ny alàlan'ny mitaky vidiny mirary faran'izay mora, mino fa izany dia hiantoka mpanjifa marobe farafaharatsiny. Marina ve izany? Tena fampiharana faran'izay tsara ve izany?
Mazava ho azy, ny vidiny ambany dia mahasarika ny mpanjifa ary izany dia mety hitranga amin'ny sehatry ny fahalalana rehetra. Saingy na izany aza, inona no hitranga raha heverintsika fa ilaina ny mampiakatra ny vidiny? ¿Ny isan'ireo mpanjifa dia hitovy?
Ho tsapanay fa nivory ny ankamaroan'ny mpanjifanay ny serivisintsika noho ny vidinay fa tsy amin'ny asanay Amin'ny tenany sy izany dia mety hahatonga antsika hianjera amin'ny fahasamihafana manimba na dia amin'ny sehatra ara-psikolojika aza, satria ho tsapantsika fa ny asantsika (tsara na ratsy) dia tsy ho noheverina ho sarobidy tokoa.
Misy dilemma ao anatin'ny fampiharana ny famolavolana sary manokana (ary koa amin'ny faritra maro hafa ampiharina amin'ny fomba manokana) ao anatin'izany, ny lahatsoratra anio dia hiresaka ity adihevitra manaraka ity:
Mpamorona tsara kokoa ve ianao ka lafo vidy kokoa?
Ny valiny dia mety ho tsotra ary amin'ny voalohany dia afaka miteny izany ny kalitaon'ny asa dia tsy mifandraika amin'ny vidiny ny mitovy na amin'ny fahombiazan'ny mpamorona. Na izany aza, ilaina ny mamaky ity fanontaniana ity imbetsaka, amin'ny fandinihana ny valintenintsika, satria, tena, ohatrinona ny lanjan'ilay asantsika? Misy fahasamihafana ve eo amin'ny vidiny mendrika ny asantsika sy ny vidiny heverintsika fa lafo?
Iray amin'ireo fomba mahazatra kokoa ahazoana torohevitra momba ny vidin'ny vokatra na ny serivisy dia mifampiraharaha amin'ny tsena amin'ny ankapobeny, mandinika sy mamakafaka ny fihetsiky ny vidin'io vokatra io. Ary izany tokoa, fomba iray be mpampiasa io, satria tsy ny rehetra no manana ny fahalalana marina ny tsenany.
Manaraka, tena ilaina izany "Fianakaviana miteraka ary matory”. Eny, ny fahatongavana ho malaza sy handeha hatory dia tsy inona fa ny fanaovana asa tsara ho takalon'ny vidiny lafo (sady tsy mora no tsy lafo), dia vidiny mirary araka ny asanay. Ilay tolo-kevitra mihitsy dia mikendry ny hahafantarana azy amin'ny asa tsara, satria, amin'ny farany, ny olona dia tsy hanelingelina ny fandoavana asa tsara, raha jerena fa indraindrayNy lafo dia mety lafo".
Tokony ho avy eo Diniho lafiny maroSatria mety mila manontany tena ireto fanontaniana ireto ianao alohan'ny hametrahana vidiny:
Ny fahasarotana amin'ny baiko.
Ny fihazakazaky ny mpanjifa.
Ny toetran'ny mpanjifa.
Ny teboka voalohany dia tsy midika zavatra hafa ankoatr'izay fantaro ny fahasarotan'ny asa izany dia ankinina amintsika ary izany dia tokony ho tanjona araka izay tratra, na manao ahoana na manao ahoana ny sarotra na tsia, satria afaka mieritreritra isika fa ny asa iray dia kely kokoa noho isika efa mahalala ny fomba hanaovana azy, ary azo antoka fa fanao ratsy.
Ny teboka faharoa, ny fihazakazahan'ny mpanjifa. Izy io dia ahitana ny fahitana ny maha maika (amin'ny vanim-potoana maharitra) ny asa ho an'ny mpanjifa, ary izany koa dia mihevitra ny fisianay sy ny fotoantsika. Ny asa manomboka anio ka hatramin'ny rahampitso dia tokony ho lafo kokoa noho ny asa anio amin'ny herinandro ambony, satria tsy mihevitra ny fahafahantsika hanana ny mpanjifa.
Farany, amin'ny teboka fahatelo resaka fotsiny ny fahitana hoe hatraiza ny fahitan'ny mpanjifa anay mahay amin'ny asa, manohana ny fandinihana sy ny toro-hevitra mandritra ny fifanakalozan-kevitra momba ny asa. Avy eo dia momba ny andian-torolàlana izay tokony hodinihintsika ny hiditra amin'izao tontolo izao amin'ny fampiharana manokana ny graphic design ary koa ny sehatry ny fahalalana rehetra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Mpamorona tsara kokoa ve ianao raha toa ka lafo ny vola aloa aminao?
joksansuriel dia hoy izy:
Ity misy zavatra apetrako am-panontaniana foana: Ohatrinona no ampandoavina amin'ny asako?
Misy lafin-javatra maro tokony hodinihina rehefa mametraka vidiny amin'ny asako ary zavatra miovaova isaky ny asa izany. Zavatra efa nohazavainao tsara tamin'ny teny vitsivitsy.
Miatrika an'io matetika aho ary tsy asehoko ny matihanina tokony hataoko satria tsy haiko ny manome lanja (araka ny antonony) ny asako ary ataoko mora vidy kokoa.
Efa nilaza aho fa tsy te-ho mpamorona.
Mamaly an'i joksansuriel
Julius Caesar MO dia hoy izy:
Misy lisitry ny vidiny ao anaty ny endriny ve sa ny tsirairay no miantoka izay heveriny?
Valiny amin'i Julio Cesar MO
Ny maha-zava-dehibe ny zavakanto Pop amin'ny famolavolana sary